येशुको स्मरण – प्रभु भोज | Nepali Christians
येशुको स्मरण – प्रभु भोज
April 2, 2015 6:50 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
येशूको क्रूसमा मृत्यु, जुन कुरा येशूले पाहिलानै गरिसक्नु भएको छ। येशू सँग र ऊहाँलाई विश्वास गर्ने ख्रिष्टियानहरुसंग हाम्रो सम्बन्ध, अहिले। येशू महिमामा फेरि आउनुहुनेछ, भविष्यमा हुने कुरा।
येशू हाम्रो लागि क्रूसमा मर्नुभयो:
किनकि छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्‍यही स्‍वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्‍युद्वारा नै मृत्‍युको शक्ति भएकोलाई, अर्थात्‌ दियाबलसलाई उहाँले नष्‍ट गरून्‌, र मृत्‍युको डरले आजीवन बन्‍धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्‌। किनकि साँच्‍चै नै उहाँले स्‍वर्गदूतहरूको होइन, तर अब्राहामका सन्‍तानको वास्‍ता गर्नुहुन्‍छ। हिब्रू २:१४-१६
येशू सँग हाम्रो सम्बन्ध:
हामी जतिले येशूको क्रूस बोकेर हिँडने निर्णय गरेका छौं हाम्रो लागि प्रभुभोज अति महत्वपूर्ण छ। यसले येशूले स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारमा हामी लगातार लागिरहन्छौं भन्ने प्रतिबध्दता देखाउँछ। पावल भन्छन् प्रभुभोजमा हामी उहाँसँग भएको स्मरण गर्छौं। उहाँसँग खान्छौं र सहभागी हुन्छौं।
येशू फेरि आउनुहुनेछ:
येशुको स्मरण – प्रभु भोज Reviewed by Admin on Apr 02 . यस बर्षको पबीत्र हप्ताको प्रभु भोजमा तीन महत्वपूर्ण बीषयहरुको स्मरण गरौँ। (प्रभु भोजमा सहभागी हुन नसक्नेहरुले व्यक्तिगत रुपमा यी कुरा मनन् गर्नुहोला।) येशूको क् यस बर्षको पबीत्र हप्ताको प्रभु भोजमा तीन महत्वपूर्ण बीषयहरुको स्मरण गरौँ। (प्रभु भोजमा सहभागी हुन नसक्नेहरुले व्यक्तिगत रुपमा यी कुरा मनन् गर्नुहोला।) येशूको क् Rating: 0
मदर टेरेसा जवानीमा यस्ती थिइन्...गुड फ्राइडे के हो ? किन मनाईन्छ ?...